FAMATSIANA SOLIKA : Efa miverina amin’ny laoniny ny famatsiana solika manerana ny Nosy
Efa miverina amin’ny laoniny ny famatsiana solika manerana an’i Madagasikara. Nanambara ny teo anivon’ny OMH, omaly fa hatramin’ny nahatongavan’ny sambo lehibe mpitatitra solika “Gulf Coral” tamin’ny zoma maraina teo dia fiara be mpitatitra solika miisa 96 sy mpitatitra solika amin’ny lalamby miisa 21 no namonjy ireo toby fitahirizan-tsolika manerana an’i Madagasikara. 29 octobre 2019
Lasantsy mitotaly 1 tapitrisa litatra sy gazoala mahatratra 2,7 tapitrisa litatra no efa notaterin’izy ireo avy any Toamasina ary mbola mitohy izany fitaterana izany. Mitohy araka ny mahazatra koa ny famatsiana ireo toby mpaminjara solika eto an-drenivohitra sy manerana ny Nosy. Ho an’ny teto an-drenivohitra manokana, efa tsy nisy intsony ny filaharambe tahaka ny nisy tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo.
Tsiahivina fa isan’ny ain-dehibe iankinan’ny fiainam-bahoaka ity resaka solika ity. Miankina amin’io avokoa ny fiainam-pirenena manontolo. Rehefa ny solika mantsy no miakatra, lany na koa misitrika dia miakatra miaraka amin’izay avokoa ny vidin’entana rehetra eny an-tsena. Izany indrindra no nahatonga ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina nandray fepetra avy hatrany vantany vao nisy ny olana.
Nampiantso ireo vondron’ny mpamokatra solika eto Madagasikara (GPM) izy tamin’ny herinandro lasa teo ary natsikafony nandritra izany ny tsy fanajan’ireto farany ny fifanarahana natao. Hafahafa tokoa mantsy ny fisehon’iny tranga iny satria voarakitra anaty fifanarahana fa tokony hisy hatrany ny tahirin-tsolika fiandry rehefa misy ny fahataran’ny sambo mpitondra solika tahaka ireny.